Usoro nke nkwụgharị si n'ala
Mma Usoro mmemme
Ntughari site na ala bu ihe omuma nke otutu ndi mmadu na-etinye aka n'olu na triceps. Na ụzọ ziri ezi nke nkwụsị elu site na ala, obere akwara nke aka, akuko, isi agha na ihu n'ihu nke deltas na-arụkwa ọrụ.
Ihe osise nke ntinye si n'ala maka onye ọ bụla. Ụfọdụ chọrọ obere ụzọ, ọzọ ndị ọzọ. Ma ọzọ, usoro usoro nkwụsị nke si n'ala dị ugbu a maka onye nkuzi ọ bụla. Ọ ga - enye aka iwuli elu ahụ dị mkpa, yana ịzụlite ntachi obi na ike.
Otu n'ime ụzọ ndị kachasị mma nke nkwụsị elu si n'ala bụ "100+". A na-emepụta mgbagwoju a maka ndị nwere data nkịtị. Ọ dịkwa mkpa ịkpachara anya maka ndị nwere ogo karịa 180 cm, n'ihi na ọ bụ ogologo oge aka ahụ na-eme nnukwu ibu. Na nke a, ọ dị mkpa iji belata oge mmega ahụ.
Ya mere, izu mbụ - anyị na-arụ ọrụ ụbọchị isii, Sunday bụ ụbọchị. N'ụtụtụ, atọ na-eru nso ugboro 10, okpukpu anọ ugboro 10 kwa ụbọchị, ọnụ ọgụgụ ahụ nke ugboro ugboro na mgbede, ma e nweela ụzọ ise. Ruo n'etiti izu, ị nwere ike ịga maka mmụba na-abịakwute (dịka ọmụmaatụ, 4, 5, 6 -cript, 5, 6, 7 - Wednesday). Ọkara nke abụọ n'izu ahụ ka ibu ahụ dị. Sunday, dịka e kwuru n'elu, bụ ụbọchị.
Site n'izu nke abụọ, ọnụọgụ nke otu ụzọ ahụ bụ otu ihe ahụ, naanị otu, anyị na-eme ka ọnụ ọgụgụ nkwụsị nke ala site na ọkara, n'otu n'otu, anyị na-arụ ọrụ ugboro 20.
Maka izu nke atọ anyị nọgidere na-arụ ọrụ ugboro atọ n'ụbọchị, ebe ị na-ebelata ọnụ ọgụgụ nke na-abịarute ma na-agbanwe nọmba nke ntinye-elu. Dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike ịbụ 25:10:20 ma ọ bụ 10:30:20. N'iji usoro a, ị nwere ike ime ngwa nkwụsị iri ise na oge dị iche iche otu ọnwa.
Nbanye site n'ala maka ndị na-amalite
Usoro nkwụsị nke si n'ala maka mmalite bụ ntụgharị nke ọzụzụ-izu ike-ezumike. Ọ bụrụ na ị na-arụsi ọrụ ike na usoro ihe a, gbalịa iwepụ ụfọdụ pushups. Ọ bụrụ na mọzụlụ ejiri nwayọọ mee ihe ahụ, mgbe ahụ, na nke ọ bụla ahụ, tinye otu nkwụsị. Emere mgbagwoju anya maka izu asaa.
Ihe nkedo na nhazi nke uzo abuo (2 sets of 7 times), izu ike n'etiti adighi ihe kariri nkeji ato.
Anyị na-agbapụta ihu ala - ugboro 15.
A na-agbanye elu site na bench. Nakwa na mbipute mbụ, ụzọ abụọ nke asaa, ma izu ike abụghị ihe karịrị nkeji abụọ.
Ọzọkwa, na-agbanye mkpịsị akwụkwọ ahụ site n'iwelite ogwe ahụ, nakwa ugboro 15.
Ntughari na nkwụsị nke ụbọchi 3 ruo 9, izu ike n'etiti setịpụrụ maka kachasị nkeji atọ.
Squats na bodibar ugboro atọ ugboro 20. Gbalịa ịnọgide na-ahụ ahụ dị ka ihe na-arụ ọrụ, nke a ga-enyere aka ịnọgide na-ahụ ahụ n'oge squats.
Ntughari aka na ntọala aka - usoro ntanye site na bench 3x10, izu ike na-ewepụta minit 1-2.
Nwelite edemede nke akpati 1x15-25.
Ụdị nkwụsị nke si n'ala maka imeziwanye
Ejikwa usoro a maka izu 6-8, ọnụ ọgụgụ ntinye aka na ọzụzụ nke ọ bụla kwesịrị ịmalite.
Mgbakwunye na owu 4x12-15 (na-agba ọsọ).
Ịkwalite okporo osisi 1x40-50.
Ngwakọta aka aka 4 nd10-12.
Ọ dị mkpa otu ụbọchị iji chịkọta otu narị push-elu. Ị nwere ike ịhọrọ ụdị ụdị bench ọ bụla si n'ala. Ná mmalite, i nwere ike ime 10 ruo 10, mgbe ahụ 4 ruo 25, na ihe ndị ọzọ. Nsogbu anyị na gị bụ ịmụta otú e si eme 2 ruo 50. Site n'ụzọ, mgbe ị rutere ihe mgbaru ọsọ a, ị nwere ike ịtọ onwe gị ihe mgbaru ọsọ iji akara 200 push-ups.
Ntughari ya na otutu nke ugboro.
Anyị na-arụkwa ọrụ kachasị elu, ọ bụ nanị ntinye aka nke akpịrị.
Ikwusi ike na-adigide, nakwa na oke.
Anyị gwụchara, ya bụ, ọrụ kachasị elu nke iweli akpati ahụ.
Nnukwu ihe nkedo nke atọ nke 20.
Otu onye na-eji aka ya esetịpụ aka abụọ nke 30.
Squats nwere bodibar n'ubu nke 4 nke 25.
Omume ahụ ọkụ
Nkuzi nke agba agba nwa maka ndi mbido
Mmega na ngalaba maka ụlọ
Egwu Oriental maka ndị na-amalite
Mmetụta dị elu n'ime ụlọ
Iji ígwè mee ihe maka otu ọnụ ọgụgụ
Ịkụzi ndị okenye na-egwu mmiri
Kedu otu esi muta igwu mmiri onye okenye?
Ihe mmega ahụ maka oke nha
Ihe omume mmemme na mgbatị ahụ
Ngwurugwu na-eri nri na ụlọ
Tom Brady wepụtara akwụkwọ ya na ntụziaka
Kedu otu esi edozi arịa n'ime ụlọ?
Gymnastics nke China
Ọka na egbugbere ọnụ nke nwa amụrụ ọhụrụ
Ọgwụgwọ purulent ọnyá
Esi esi esi nri ọka porridge?
Okroshka na ọbara
Akara dị oke mkpa maka ihe ịrịba ama nke zodiac
Isi iyi kachasị elu n'ụwa
Na-agbapụta mmiri site na tank ruo ebe mposi
Kedu ka m ga-esi kwusi ekwentị ma ọ bụrụ na etinji ogwe aka?
Ihe ederede maka paspọtụ maka nwa ahụ
Ndacha maka ntutu
Osisi na-eto ngwa ngwa
Alejandro Gonzalez Inarrito na Oscar-2016
Cress-salad na windowsill
Mmiri ara ehi na bred